Kitra – Fanomanan-tena: mety hiova ny lisitr’ireo mpilalao handrafitra ny Barea | NewsMada
Kitra – Fanomanan-tena: mety hiova ny lisitr’ireo mpilalao handrafitra ny Barea
Mety mbola hiova ny lisitry ny mpilalao 23 efa nampahafantarin’ny tale teknika nasionaly sy ny tompon’andraikitry ny serasera ary ny filoha lefitra voalohany eo anivon’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra.
Anton’izany, mbola hojeren’i Nicolas Dupuis, mpanazatra, tompon’ny teny farany ny momba ireo mpilalao tsirairay avy. Anisan’izany ny zava-bitany, ny ora nilalaovany, ny tanjany ary ny ho fahafahany manaraka ny fiofanana hatao any Luxembourg, araka izay fandaharam-potoana napetraka.
Misy mpilalao tsy mijoro akory ao amin’ny ekipa misy azy mantsy nantsoina ho Barea. Ao koa ny sasany tsy ho afaka hamonjy ny fampivondronana sy hiatrika ilay lalao firahalahiana ato ho ato.
Metanire, Amada, Carolus…
Anisan’ireny i Romain Metanire, milalao any Etazonia. Tsy mbola misy ny sidina mampitohy io firenena ilalaovany io amin’i Eoropa. Toraka izany koa i Ibrahim Amada, irakiraka ao amin’ny Al Khor any Quatar, izay mbola ao anatin’ny fifaninanam-pireneny tanteraka. Tahaka izany koa i Carolus, any Arabia Saodita. Ankoatra azy telo mirahalahy, tsy anisany koa i Abel Anicet, ao anatin’ny tsy fahasalamana.
Ireo antony rehetra ireo no mety hisian’ny fiovana amin’ny lisitry ny Barea raha toa ka tsy mahafa-po an’i Nicolas Dupuis, mpanazatra.